[Wednesday, January 2nd, 13] :: Qaadashada daroogada waxbarashada
Kobenhagen:Waxba kuma jabna qaadashada dawooyinka ka caawiya ardayda Denmark soo bandhigista imtixaannada, sidaas waxa qaba tiro ka badan rubuc dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 18 iyo 30 jir, sidu muujiyay baadhitaan ay Gallup u samaysay DR Fyn.
796 qof ayaa ka jawaabay suaalo la waydiiyay, kuwaasoo qabay, in aanay waxba ku jabnayn qaadashada dawooyinka ka caawiya ardayda soo bandhigista imtixaannada. Arrintuna waa caddaan, marka qofka da'diisu sii yar tahayba waxba uma arko qaadashada dawooyinkaas.
Guud ahaan sida baadhitaanku muujiyay, 10kiiba siddeed ayaan soo dhawayn qaadashada dawooyinkaas. Laakiin kooxaha da'doodu yar tahay ayaa tiro rubuc ka badani soo dhaweeyeen qaadashada dawooyiaas.
Filosoofadda Nana Kongsholm ayaa qoraalkii ay ku qalinjebisay ku ogaatay fikradda togan ee dhallinyaradu ka haystaan dawooyinka diiriya maskaxda.
- Dhallinyarada aan ilaa hadda la hadlay, ayaan u arkin daroogo. Haddii si kale loo dhigo waxay yidhaahdaan, waxay daroogo noqonaysaa, marka maalin kasta la isticmaalo, laakiin waxba kuma jabna marka loo qaato arrin fiican oo lamahuraan ah, ayay ku tidhi DR Nyhder.
Tusaale ahaan dawooyinka ay u isticmaalaan diirinta maskaxda, si ay si fiican ugu soo bandhigaan imtixaannada, waxa ka mid ah dawada qalqaallinimada (ADHD), Ritalin. Waa dawo dadka qalqaalliga ah ee wax la socoshadu ku yar tahay miisaanta dhugtooda. Laakiin hadda si ballaadhan ayay u isticmaalaan ardaydu, si ay si fiican ugu la socdaan imtixaannada. Isticmaalkeeduna wuu ka ballaadhan yahay, sida la filayo:
Urur shaqaaleedka DJØF ayaa sannadkii hore sameeyay baadhitaan la xidhiidha nolosha ardayda, kaasoo muujiyay, in boqolkiiba toddoba ardayda dhigata dhaqaalaha iyo sharciyadu ay imtixaannada u isticmaalaan dawooyin dardargeliya maskaxda.
Dhallinyarada ayaa dawooyinkaas ku magacaaba "daroogada waxbarashada", si ballaadhan ayaana loo isticmaalaa, ayay tidhi Margit Anne Pedersen, oo digriiga ph.d. ka diyaarisay sida dhallinyaradu u isticmaalaan dawada Ritalin:
- Garan maayo inta ay baahsan tahay, laakiin waxaan ogahay, in erayga "daroogada waxbarashada" ay yaqaaniin badi ardayda dhigata fasallada 2aad iyo 3aad ee dugsiyada sare, ayay tidhi.
Ardaydaas waxa ka mid ah Ditte Ørum, oo dhigata jaamacadda Syddansk Universitet. Iyadu laf ahaanteeda ma isticmaasho dawadaas, laakiin markay dugsiga sare ku jirtay way la socotay jiritaanka dawo dardargelisa maskaxda, ayay tidhi, waxana arday badan ku kellifi jiray culayska waalidku ku saarayaan, inay ku fiicnaadaan waxbarashada.
- Waxaan soo qaatay dugsiga sare ee ganacsiga, intii aanan koofiyadda xidhan. Si loo hirgeliyo filashada waalidka, waxa lagu qasbanaa, in maalin oo dhan wax la akhriyo, si loo helo calaamado fiican, ayay tidhi.
Ditte Ørum ma qabto, in laga hadlayo daroogo si xun loo qaato:
- Miyaanay la mid ahayn kaafi? Kaafi ama Redbull? Saamayn way ku yeelataa dadka, waxana dhici kartain aanay ahayn saamayn fiicnayn. Qaabka ay dhibaato u keeni kartaana, waa siyaabaha ay waxyaabaha kaleba u keenaan, ayay ku tidhi DR Nyheder.